QOQA IMIPHAKATHI | Local Government Action
Ukuhlela nokuqoqa umphakathi yiyona ndlela enhle yokuvikela amalungelao akho, ulwisane nokungafanele, inkohlakalo noma ukucwasa, ukwenza ngcono ukuthola amanzi, ugesi kanye nezinye izidingo, noma ukususa izithiyo ekubandakanyeni umphakathi. Nanka amacebo okukusiza ukuze ufeze umgomo wakho:
Hlela ngokubiza umhlangano wokuxoxa ngezinkinga zendawo uthole ukuthi abanye benzani, qoqa amaqiniso, bese nixoxe ngokuthi nizozenza kanjani izinqumo njengeqoqo ukuze nisebenzisane ukusombulula izinkinga.
Akhani ubudlelwano namanye amaqoqo omphakathi, izinhlangano noma imibuthano ukuze kube nomdlandla futhi nifake incidenzi.
Akhani amakomidi amawadi asebenzayo ukuze niqoqe ulwazi futhi nifake izinkinga zenu kulokho okuzodingidwa umkhandlu emhlanganweni.
Thola izinhlangano ezingekho kuhulumeni, njengeziNhlangano eziNgekho kuHulumeni ezilwela amalungelo abantu, ezibhekene nenkinga efanayo.
Qapha iqophelo lemisebenzi emphakathini wakho.
Iqophelo lemisebenzi olitholayo liwudaba olubalulekile emphakathini futhi unamandla okufuna ilungelo lakho lezemfundo eyisisekelo, ezempilo, amanzi, ukuthuthwa kwendle nezidingo kagesi! Qapha ukulethwa kwezidingo ngakini ngokuhamba imihlangano nokuqapha isabiwomali nenqubo ye-IDP. (Ukuze uthole usizo ngokuqapha isabiwomali samanzi nesikagesi bheka inkomba yesabiwomali saManzi ngokulandela ithuluzi lezemfundo ekhasini (106)
UMthethosisekelo uhlongoza ukuthi unelungelo lokuthola ulwazi.
32(1) Wonke umuntu unelungelo lokuthola -
a) noma oluphi ulwazi olugcinwe uhulumeni; futhi
b) noma oluphi ulwazi olugcinwe omunye umuntu oludingekayo ukuze kuvikelwe ilungelo elithile..
Kubalulekile ukuqoqa wonke amaqiniso mayelana nenkinga. Lokhu ungakwenza ngokwenza ucwaningo ngenkinga, uqoqe ubufakazi ngokuxoxisana nabantu, noma ngokubiza umhlangano lapho bonke abantu bengakwazi ukuchaza ngezinkinga ezibakhungethe. Bhala phansi futhi wenze uhlu lwemininingwane yezinkinga ukuze uzakhele isithombe esigcwele senkinga.
Kubalulekile ukugcina amarekhodi ayo yonke imihlangano kanye nemizamo yokuxazulula inkinga. Abanye lokhu bakubiza “ngecala eliqulelwa ephepheni”.
Ukugcina icala eliqulwe ephepheni kudinga ukuthi ubeke amarekhodi akho konke okuphathelene nodaba, okubandakanya imininingwane yezingcingo ezishayiwe, imihlangano, noma ezinye izingxoxo namakhansela kamasipala noma abasebenzi abahlinzekela ngezidingo kahulumeni. Imininingwane kufanele iqukathe usuku, okuxoxiwe, izibopho ezenziwa noma ezingenziwanga, nalolo lwazi oludaluliwe
Thola ulwazi ngomthetho noma inqubomgomo efanele
Umthetho nenqubomgomo kubalulekile, ngakho xoxa namaqabane ngaphambi kokuqala umkhankaso noma umbhikisho.
Uma uba nomhlangano nabasebenzi, cela ikhophi yomthetho noma inqubomgomo/izinhlelo/amacebo aphathelene nenkinga yakho. Buza ukuthi umasipala uhlele ukwenza njani. Ukuthola lolwazi kuzokusiza ukuthi wazi ukuthi inkinga ilele kuphi. Ngabe unenkinga ngoba kungekho nqubomgomo kamasipala, noma ngoba inqubomgomo ingalungile, noma ngoba umasipala akawulandeli izinhlelo zawo/inqubomgomo/imithethodolobha?
Umasipala wakho kufanele ukuhlinzekele ngemibhalo oyicelile, okubandakanya inqubomgomo, izinhlelo, amacebo, imithethonqubo, imithethonqubo, nomthetho.